Waa Maxay Faa'iidada Caafimaad Ee Laga Helo Liin Dhanaanta? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Waa Maxay Faa’iidada Caafimaad Ee Laga Helo Liin Dhanaanta?
Waa Maxay Faa’iidada Caafimaad Ee Laga Helo Liin Dhanaanta?
Liin dhanaanta waxaa laga helaa faa’idooyin badan oo halkaan lagu soo koobi karin.
laakiin waxaan ka hadli doonaa insha allah faa’iidooyinka badanaa la isku waafqasan yahay.
1:Liin dhanaanta waa aashito laakiin markii ay jirka gudaha u gasho, waxay yaraysaa aashitada jirka, taasoo isu dheellitiraysa dheecaanada jirka.
2:Liin dhanaanta waxaa aad ugu badan fitamiin C-ga, fitamiinkaan oo xoojiyo difaaca jirka lana dagaallamo infekshanka ay feyrasyadu keenaan sida Hergabka iyo Ifilada.
3:Liin dhanaanta waxay caawisaa shaqada beerka, waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah, sida aashitada uriik “Uric Acid”, waxay kaloo mishaa dacarta, sidaas daraadeed waxaa lagu taliyaa in qofka uu subaxii hore cabo biyo qandac ah oo liin dhanaan lagu daray, si beerka ay u nadiifiso.
4:Liin dhanaanta waxay nadiifisaa mindhicirrada, waxay kordhisaa dubaaxinta mindhicirrada si ay jirka uga saaraan waxa mindhicirrada ku dhex jiro, waxay kaloo la dagallantaa gooryaannada caloosha ku jiro sida toonta oo kale.
5:Liin dhanaanta waxay daawo u tahay cudurka cirid dhiigga “Scurvey”, xanuunkaan oo aad ugu badan badmaaxayaasha, waxaa lagula taliyaa inay liin dhanaan ku filan ay u qaataan safarradooda.
6:Liin dhanaanta waxaa ku jiro aashitada loo yaqaano “Citric acid” taas oo jirka ka caawisa inay misho ama dhalaaliso dhagaxaanta ku samaysma xameetida iyo kilyaha, dadka ay ku soo laalaabtaan dhagaxaanta kilyaha iyo xameetida waxaa lagu booriyaa inay cunista liin dhanaanta joogteeyaan.
7:Qolofta liin dhanaanta waxaa ku jiro maaddo loo yaqaano “Tangeretin”, taas oo la hubiyay inay daawo u tahay xanuunka laleemada ee Parkinson’s disease.
8:Liin dhanaanta waxay xal u noqotaa cabburka iyo oksajiin yarida, waxayna siisaa jirka awood uu oksajiin yar ku noolaan karo, arrintaan oo la ogaaday markii uu ku guuleystay ninkii ugu horeeyay oo gaara cirifka buurta “Mt. Everest” oo sheegay inuu liin dhanaan kaliya cuni jiray inta uu safarka buurta ku sii jiray!.
9:Liin dhanaanta waxay xoojisaa xididada, waxayna yaraysaa halista inay xidida dillaacaan ama qofka dhiigbax jirka gudihiisa ah ku dhaco, khaasatan dadka qabo dhiig-karka.
10:Liin dhanaanta waxay wanaajisaa aragga, iyadoo daawo u ah xanuunada ku dhaca shabakadda isha ee “Retina” waxaana la ogaaday inay sabab u tahay maado liin dhanaanta ku jirto oo loo yaqaano “Rutin”.
11:Liin dhanaanta waxaa ku jiro 22 walxood oo kansarka la dagaallamo, kuwaas oo alle ku abuuray liin dhanaanta, howsha badan ey qabtaan waa hakinta ama joojinta tarmidda unugyada kansarka.
12:Liin dhanaanta waxay jirka siisaa nafaqo kala duwan oo iskugu jirto, fitamiin c, uric acid, fitamiin b, kaalsiyam, birta, magniisiyam, bootaaishiyam iyo kuwa kale oo badan.
13:Liin dhanaantu waxay nuursiaa maqaarka qofka, waxaana loo adeegsadaa in jirka looga baab’iyo haaraha wajiga noocyadooda kala duwan, waxaana taariikhda la sheegaa in dadka shiinaha ay caruusadaha ugu qubeyn jireen liin dhanaanta dhowr maalmood ka hor inta aan la aroosin! waana arrin cilmibaarista lagu arkay in liin dhanaanta ay maqaarka ka baab’iso haaraha, iftiin-na u kordhiso, unugyada dhintay-na ay ka qaaddo sidoo kale laalaabyada maqaarku samaysto inay yarayso iyo waxyaabo kale.
Liin-dhanaantu waa jeermis dile awood buuxa leh, waxay la dagaallantaa caabuqa bakteeriyada iyo fayrasyada qaar oo ay ku samayso waxa loo yaqaano “inactivation”.
Qodobkee Dareenkaaga Si Gaar Ah Usoo Jiitay?
Akhriste ugu yaraan hadaad akhrisatay qormadan caafimaad fadlan #LIKE saar si ay walaalaha kale ee boggan ku xiran usii gaarto, haddi aad sii #SHARE garaysid-na kaba sii fiican oo walaalaha iyo saaxiibadaada ayaa waxaad faa’iiday lasii wadaagtay, anigana dhiirigelin bay ii tahay mahadsanidiin.
Previous articleMADAXWEYNE FARMAAJO IYO DHIGGIISA KOONGO OO KA WADA HADLAY HORUMARINTA ISKAASHIGA LABADA DAL
Next article𝗖𝗨𝗡𝗧𝗢𝗢𝗬𝗜𝗡𝗞𝗔 𝗨 𝗪𝗔𝗡𝗔𝗔𝗚𝗦𝗔𝗡 𝗛𝗢𝗢𝗬𝗔𝗗𝗔 𝗨𝗨𝗥𝗞𝗔 𝗟𝗘𝗛. 🌽🍠🥑🥬